Tiger Woods kunye no-Elin Nordegren Iinkcukacha zoMtshato
Iphi na apho i-Woods no-Elin Nordegren batshata khona
Umtshato kaTiger Woods ku- Elin Nordegren wenziwa ngo-Okthoba 5, 2004. Umtshakazi wayegqoke isambatho esilula, esinqabileyo, esingenamikhono kwaye umyeni wayegqoka isambatho se-beige. I-Woods yayineminyaka engama-28 ubudala kunye ne-Nordegren 24. Batshintsha izibhambathiso kwaye bathiwa ngumyeni nomfazi malunga ne-5: 40 ebusuku.
Lapho i-Tiger-Elin Wedding yavela khona kwaye ixabisa kangakanani
Ixesha lendawo apho? U-Woods noNordegren batshata kwisizwe saseCaribbean kwisiqithi saseBarbados.
I-Sandy Lane Resort yayiyindawo yokubambela imikhosi.
Umcimbi womtshato wenziwa ngaphakathi kwipagoda kwiindawo zokungcebeleka, udibene neerpe ezibomvu ezixeliweyo ezingama-500 ezazingena kuyo iTiger.
Kwaye iTiger no-Elin babenokhenketho kubo bonke: I-Woods yakhankanya yonke indawo - ihotele yayo yokunethezeka, indawo yayo yokungcebeleka ngaselunxwemeni, izifundo zayo zegalufa ezimbini kunye neeklubhobhu zazo-iveki.
Ixabiso lomtshato lalingakanani? Ngokutsho kweengxelo zeendaba ngeli xesha, uqikelelo lwama-$ 1.5 yezigidi.
Ukhuseleko oluphakamileyo kwi-Woods-Nordegren Wedding
Akukho zithombe ezisemthethweni zomtshato ezikhoyo; esi sibini asizange sikhululwe nayiphi na imifanekiso yomtshato. Iifoto zeparazzi zaye zaphazamiseka yimilinganiselo ekhuselekileyo yokhuseleko. Ezi ziquka i-Woods ibhalela yonke i-helicopter ye-charter ekhoyo kwiBarbados ukukhusela ukusetyenziswa kwabo ngabafaki beefoto, kunye nokusetyenziswa kweplywood kunye nokubeka indawo yezityalo ezide kunye nemithi ukuvimba ukukhanya kwamehlo.
Uluhlu lweeNdwendwe kunye noTonwabo
Ngaba kukho umntu owaziwayo oya kumtshato kaTiger Woods? Iindwendwe ezingama-120 zazikho, kunye neenkwenkwezi ze-basketball uMichael Jordan kunye noCharles Barkley phakathi kwazo.
Kukho iingxelo ngelo xesha, ngokuphindaphindiweyo kwiminyaka, ukuba i-Oprah Winfrey yayikho, kodwa ezo ngxelo ziphosakeleyo.
UWinfrey kamva wathi wayengekho kwaye wayengayazi ngeWols ngexesha lomtshato.
Omnye umntu obalulekileyo owakungekho u-Jesper Parnevik. I-golfer yaseSweden ngumntu owazisa i-Woods no-Nordegren ngethuba le- 2001 eBritish Open , xa u-Elin wayesebenza njengePanvivik's nanny. U-Parnevik ucacise "i-brouhaha" malunga nomtshato ekunqumeni ukudlala kwi-Event PGA Tour esikhundleni.
Ngokuphathelele ukuzonwabisa lomtshato: I-rock band Hootie kunye ne-Blowfish eyenziwe.
Hayi, umtshato we-Woods-Nordegren awuzange uhlale. Isiqabane esahlukana ngo-2010. Babenabantwana ababini kunye -intombi, uSam Alexis Woods , kunye nendodana, uCharlie Axel Woods .
UHarry Vardon, iGraant yaseMpumalanga yePro Golf
UBobby Jones: Umxholo weGosa leGalofu
I-Admissions yeYunivesithi yaseSt. Peter
Imvelaphi yamaPagani yoSuku lukaValentine
Ukuqulunqwa kweeNkampani zeItali zeNkcubeko
Avon, Mary Kay kunye no-Estee Lauder Uvavanyo lwezilwanyana